Google inovhura maviri akakosha masisitimu | Linux Vakapindwa muropa
Google inovhura maviri akakosha masisitimu
Google ikambani inozivikanwa nekuve nenhamba huru yemapurojekiti akavhurika. Asi nguva pfupi yadarika akaita mamwe matanho anonakidza enharaunda yakavhurika-sosi, uye ndiko kuvhura maviri emapurojekiti ake makuru. Izvi zvine hukama neApple, asi zvese zviri zviviri zvakasiyana kubva kune imwe. Iye zvino ivo vachange vachiwanikwa kubva kuGitHub kune wese munhu kwemavhiki mashoma ...
Chirongwa chekutanga chatiri kutaura nezvacho injini yezwi reRarama Nyora, chishandiso chinonakidza che kucherechedzwa kwekutaura uye kutaura-kune-zvinyorwa zvinyorwa ye Android. Izvo zvinoenderana nemachina ekudzidza algorithms ekushandura odhiyo kuita zvinyorwa zvidiki munguva chaiyo. Kana iwe uchifunga nezvazvo, hazvisi zvakakosha chete kunharaunda, asiwo kusimudzira kuwanikwa kweLinux masisitimu, nekuti hachisi chinhu icho chatinofanira kuzvikudza zvakanyanya uye zvimwe zvakawanda zvinogona kuitwa.
Kune rimwe divi, Google yakavhurawo imwe yeayo masisitimu esoftware. Uye ndizvo izvo zve chiratidzo chekutevera kweApple. Aya marudzi emapurojekiti haana kunyanya kuitika pakati peaya atovepo akavhurwa sosi, saka inhau dzakanaka. Kuve nekodhi iyi kunotendera vanogadzira kuti vagadzire zvirinani masisitimu anoenderana navo. Uye, ndinodzokorora, icho chinhu chakakosha kuvandudza kuwanikwa kana zvimwe zvinhu zvisina kunyatso chenjera mune akavhurika sosi mashandiro masisitimu, kunyangwe mu Android chinhu ichi chagadziridzwa zvakanyanya ...
Mune ino yechipiri yakaburitswa sisitimu, chiratidzo chekutevera system, yakavakirwa pane MediaPiple muchina wekufunda muchina. Iyi software inosanganisa zvitatu zvezvinhu zvekuchenjera kwekunyepedzera: detector yemichindwe, modhi inodzosera 3D ruoko mapoinzi, uye chiratidzo chekuziva. Nenzira iyi, ruzivo munzvimbo dzakasiyana siyana uye matekinoroji mapuratifomu achavandudzwa.
Github - kuzivikanwa kwezwi
Github - chiratidzo chekuziva
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google inovhura maviri akakosha masisitimu
Ndinovimba mumwe munhu anofarira kugadzira chimwe chinhu nemuturikiri mupenyu. Ivo vedu vanoshanda nekubvunzurudzwa uye izvo mhando yechinhu vanozokutenda nekusingaperi!
Distri - distro yekumhanyisa pane ekukurumidza mapakeji manejimendi matekinoroji
Power Toys yeWindows 10 inowanikwa pasi peyakavhurika sosi rezinesi paGitHUb